Sabiib - Wikipedia
Miraha cinabka oo la qallajiyay
Kani waa bog ku saabsan sabiibka. Maqaalo kale fiiri midhaha laga sameeyo sabiibka
Sabiib (; ) waa midho la qalajiyey ee canabka. Sabiibka waxaa laga sameeyaa midhaha canabka oo loo dhigo ileyska qoraxda wakhti cayiman, ka dib la dabeeyliyo ka hor intaanan la cunin. Sabiibku waa midho aad u macaan oo laga isticmaalo dhamaan caalamka oo dhan. Inta ugu badan midhah sabiibka waxaa la cunaa ayagoo cayriin (sidii ay kaga yimaadeen midhah canabka), halka deegaano kale ay kariyaan sabiibka ama lagu dhex daro cuntada la karinayo. Tusaale ahaan, wadanka Soomaaliya waxaad ku dhex arki sabiib lagu dhex kariyay bariis kaasi oo loogu talogalay qurxin iyo macaaneyn. Deegaano kale waxay sabiibka u isticmaalaan khamiirin iyo shiiditaan.
(L. f. alba DC.)
( L. var. capitata L. f. rubra (L.) Albert Thellung)
Guud ahaan midhaha sabiibku waxay leeyihiin dhowr nooc taasi oo ku xidhan nooca canab ah ee laga sameeyay iyo wakhtiga lagu dhaafay kulka iyo ileyska qoraxda. Midaba ugu badan ee lagu yaqaano sabiibka waxaa ka mid ah: madoow khafiif ah, casaan madoow xiga, cadaan khafiif ah iyo huruud jaamud ah.
Si la mid ah ereyo badan oo ku jira luuqada Soomaaliga, ereyga sabiib waxaan ka soo amaahanay eryga "" ee luuqada Carabiga; kaasi oo lagu sharaxo midho qalalan oo macaan.
Noocyo kala duwan oo sabiib ah
Sidaan horay u soo sheegnay nooca sabiibku wuxuu ku xidhan yahay nooca midhaha canabka ah ee la isticmaalo. Sidoo kale waxaa jira in midhaha canabku leeyahay midabo badan oo kala duwan, (sida madoow, buluug, cagaar, buni, iyo huruud) kuwaasi oo ka turjumaya midabka uu yeelanayo sabiibku. Si loo helo sabiib saafi ah, waxaa inta ugu badan la isticmaalaa midho canab aan lahayn laf; meelaha qaarna waa laga saara lafta ku jirta canabka.
Guud ahaan, xajmiga iyo midabka sabiibku wuxuu ku xidhan yahay geedka canabka ee loo isticmaalo in laga sameeyo. Waxaa jira noocyo loo isticmaalo kimiko si loogu sameeyo midabyo qurux badan, kuwaasi waxaa ka mid ah "Sabiibka dahab". Si loo sameeyo sabiib dahabka waxaa midhaha canabka lagu daraa iskudhiska curiye kimiko salfar labo ogsajiin taasi oo markuu midhuhu qalalo ka dhigta mid leh midabka dahabka.
↑ Dom Costello. Kew.org http://www.kew.org/plants/festivefoods/raisins.html. Soo qaatay 16 January 2013. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabiib&oldid=147809"
Last edited on 23 Sebteembar 2015, at 06:04
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Sebteembar 2015, marka ee eheed 06:04.